Sincelinux တွင်အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်တစ်ခုရှိသည်: D [Updated] | Linux မှ
ယခုတွင် Desdelinux တွင်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ကူညီမှုဖိုရမ်တစ်ခုရှိနေသည်။
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, NOTICIAS
ကျနော်တို့ကမျှော်လင့်ခဲ့ကြပြီးသားရှိသည်။ ငါတို့ရရှိနိုင်သောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏အကူအညီမှကျေးဇူးတင်ပါသည် ကူညီပံ့ပိုးမှုဖိုရမ် အတွက် FromLinux.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုရမ်ကိုနောက်ဆုံးအမျိုးအစားမဟုတ်သောကွဲပြားသောအမျိုးအစားများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှအကြံဥာဏ်များပေးလိုပါသည် ဖိုရမ်ပြထားပါသည် နည်းနည်းတိုးတက်စေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောအရာတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းမှာစပိန်ဘာသာပြန်ဖိုင်သည် ၁၀၀% မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ထူးဆန်းသောခလုတ်တွင်အမှားသေးသေးလေးများတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပြီး၎င်းကိုကောင်းစွာအသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ပါသည် စည်းကမ်းများယုတ္တိဗေဒလိုပဲ ..
ဖိုရမ်တွင် moderate လုပ်ခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသောအသုံးပြုသူများအားလုံးသည်မိမိတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်ပေးပို့နိုင်သည် အဆက်အသွယ်ပုံစံ.
ငါထင်ဒါက moderator ၏အမူအကျင့်ဖြည့်ညှင်းကိစ္စရပ်များအတွက်စည်းကမ်းချက်များ၌စံနမူနာဖြစ်ရမည်ကြောင်းပြောနေစရာမလိုဘဲငါ 100% ^ ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းရှင်းလင်း, ငါသူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကသူတို့ကသူတို့ကသင့်လျော်သောမြင်သည်အတိုင်းမိမိတို့အချိန်ရှိသည်ကိုနားလည်သောကြောင့်, ငါရှင်းလင်း ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ယခုတွင် Desdelinux တွင်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ကူညီမှုဖိုရမ်တစ်ခုရှိနေသည်။
54 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
စပိန်ဘာသာပြန်ဖိုင်သည် ၁၀၀% မဟုတ်သကဲ့သို့သင်သည်ထူးဆန်းသောခလုတ်တွင်သေးငယ်သောအမှားများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဟားဟားပြီးတော့ RAE ကကျွန်တော့်ကိုကြွေးတင်နေလိမ့်မည်။ HAHAHAHAHA အတွက်
Hahahahahaha ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! တစ်ချိန်ကဆရာတစ်ယောက်က“ RAE ကငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းပါ” ဟုပြောခဲ့သည်
PS: စာရိုက်တာကအင်္ဂလိပ်စာမိတယ်။ ငါတို့သူငယ်ချင်း RAE ကစာမပြန်ဘူး။
ဟေ့၊ ငါမှာမင်းရဲ့အမှာစာ၊ GDM အခင်းအကျင်းရှိပြီးသား။ ငါထုတ်ဝေဖို့လိုတယ်
ထိုစကားလုံးကို elav မှကျွန်ုပ်အားသင်ပေးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူ၏မြည်းသည်သူ၏ haha ​​ဖြစ်သည်
ငါပြီးသားငါ haha ​​အခြားအမှုအရာလုပ်နေတာလုပ်ပါ။
ငါတွေ့ခဲ့ပြီးပြီ LMDE ဗားရှင်းအစား Mint ဗားရှင်းအတွက်အခြေချရမည်
ထိုအခါငါ av လav hahaha "မြည်း" ကိုငါပေးမည်
သငျသညျအနည်းငယ်သာအတွက်ကြီးထွားလာကြသည်! ကြိုက်တယ် !!! ဂုဏ်ယူပါတယ် !!! 😉
သင့်ကိုလည်းဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အကြောင်းအရာနှင့်ဗေဒဆိုင်ရာနှစ်ခုလုံးသည်သင်ယခု Net ၏အကောင်းဆုံး Linux ဆိုဒ်များဖြစ်သောကြောင့် because
Yoyo ^^ စကားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ GNU / Linux ချစ်သူများစိတ်ဝင်စားသောအရာများကိုရှာဖွေပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောနေရာတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
ဟေ့၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ မင်းဒီဖိုရမ်မှာမင်းဒါကိုသဘောကျတယ်။ တကယ်တော့ဒီဟာက Ubuntu နဲ့အခြား Ubuntu တို့မှာမရှိတဲ့အရာပဲ။ ငါဆိုလိုတာကမင်းနားလည်ရဲ့လား။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ဖိုရမ်များကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အတိုင်းလှုံ့ဆော်မှုများရှိခဲ့ဖူးပြီး MuyUbuntu မှဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ hahaha သည်ပထမဆုံး ubunto တွင်တစ်ခုခုထုတ်ပြန်သည်နှင့်နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤဖိုရမ်သည်somethingပြီ / မေလကတည်းကကျွန်ုပ်သိကျွမ်းသောသူများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလူဟုထင်ရသော်လည်းကောင်းမွန်သောအသံများဖြင့်စာဖတ်သူများလည်းဖြစ်သည်။
အချင်းလူသား၊ မင်းဟဟမင်းပျောက်နေပြီ၊ ဘာတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတာကြည့်စမ်း။ ငါတို့တင်မယ့်အထူးဖိုရမ်ပဲ။ http://foro.desdelinux.net/viewforum.php?id=25
… .. JAJAJAJAJAJAJA !!!!!!!!!!!!!!
ဟားဟား။ ဟေး Gaara၊ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားရမယ်ဆိုရင်ဖိုရမ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြံပြုချက်ကတော့ Ask Courage လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းပါ။ အကယ်၍ သူသဘောတူမယ်ဆိုရင်ပါ။
ထိုမေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်။ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း 😀
ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး, ဒီအပိုင်းကို full- လွ offtopic haha ​​ဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားဒီမှာတကယ်ရှိတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်
ကျွန်ုပ် Mac မှဘလော့နှင့်ဖိုရမ်သို့တင်နိုင်ပါသလား။ 😛
NO ဟဟားဟားက Linux မှမဟုတ်၊ Mac မှဟဟားဟားဟုပြောဆိုသည်
သင် Linux အကြောင်းပြောဆိုနေသမျှကာလပတ်လုံး HAHAHAHA၊ သင်ဆန္ဒရှိပါက MS-DOS မှထုတ်ဝေသောပြproblemနာမရှိပါ။ Courage HAHAHA ကိုအထူးဂရုမပြုပါနှင့်။
အမှန်တရားကတော့၊ ငါဒီမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ဘယ်လောက်များများထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါတွေးမိခဲ့တယ်၊ ထပ်တိုးဖိုရမ်နဲ့အတူသူတို့ဟာကွန်ယက်ရဲ့ကျေးကျွန်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဟားဟား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်စကာ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါ Desdelinux အတွက်အချိန်ပြည့်နေလိမ့်မယ်။ စိတ်ကူးမှာ၊ သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်းကပ်ပြီးပူးပေါင်းလိုသည့်အတိုင်း၊ FromLinux သည်ကျွန်ုပ်သို့မဟုတ် KZKGGaara ပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်မဟုတ်သည့်အချက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖွဲ့စည်းရန်နောက်ဆုံးအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်၊ ထို site သည်လူတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်သာမက avlav နှင့်ငါကိုယ်တိုင်သာမကလူတိုင်းကထုတ်ဝေသည်။ လူတိုင်းကအဆင်ပြေစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေလျှင်စီမံခန့်ခွဲမည်၊ တကယ်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲရှိတာအတိအကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့မကောင်းဘူးဆိုရင် ... ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်။
ဟဟဟေ့ဟားဟားငါမှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်မိမယ်ဆိုရင် <° Linux hehehe မှာအံ့ ises စရာများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအီးမေးလ်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Courage ကဲ့သို့အဘယ်အရာမျှမပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် HAHAHA ကွန်ယက်၏ကျေးကျွန်များဖြစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ငါကောင်းတစ် ဦး Moderator ဆယ်သုံးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်ပြီးလိုပါကအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ပါ။ users …အသုံးပြုသူများအကြားစော်ကားမှုမရှိစေရန်၊ Moderators ၏လုပ်ရပ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။
သင့်ရဲ့ Excellency !!! သင်၏အလုပ်နှင့်သင်အောင်မြင်နေသောအောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်😉
ငါဖိုရမ်ကိုကြည့်နေစဉ်ဒီနေရာမှာအမှားအယွင်းအနည်းငယ် - အကောင့်ဖန်တီးရန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများအရ«လူသိရှင်ကြား» - လျင်မြန်စွာပြုပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အရာ😀
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်အတွက်အရာတစ်ခုခုကို je contribute နှင့်အတူအထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
ကောင်းပြီ, ထိုစပ်စုစကားလုံးဟာ RAE ၌မပေါ်လာပါဘူး haha
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဟားဟားဖိုရမ်မှာမင်းတို့ကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မင်းကမင်းကိုမော်ဒန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုလက်ဆောင်ပေးချင်ရင် let အသိပေးပါ
သူတို့ကိုကူညီ? ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ သင်ဘာပဲလိုအပ်ပါစေဒီအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်သိအောင်ပြောပြပေးပါ။
သင်ကျန်နေတဲ့ယူရို ၆၀၀ လောက်ရှိပါသလား …။ HAHAHAJAJAJAJAJAJA !!!!!
ငါဖိုရမ်စတိုင်ကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပြီးသူတို့နဲ့မတူပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် Arch linux ကိုငါပြန်သတိရစေတယ်😀
၎င်းသည်ငါ့ကို Xfce ဖိုရမ်အကြောင်းပိုမိုသတိရစေသည်
HAHA - တူညီတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခု… FluxBB 😉ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား
သင်၏ Desdelinux စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုချက်အသစ်အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ငါ Moderator ဖြစ်ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတစျခုဖွစျဖို့အဆင့်မြင့်အသိပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
ဘယ်လိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်း? ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ၊ ဖိုရမ်များတွင် moderator သည်ပုံမှန်အားဖြင့် moderator ဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအချို့သော site များတွင် moderator အဆင့်ရှိကြောင်းဖယ်ရှားပါသည်။
အနတ္တမဟုတ်သည်မှာ၎င်းသည်အနုမြူဗုံးကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ဆိုသည့်ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အရူးမဆို gnu / linux (ဥပမာ - Garbage, Elva, El Arenoso နှင့်ငါကဲ့သို့သော) အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုချီးကျူးပါတယ်, ငါယခုသင့်ရဲ့ဖိုရမ်သို့ဝင်ရောက်နေပါတယ် ... အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးက၎င်းသည်ဖိုရမ်တစ်ခုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကောင်းမွန်သောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့အားလုံးသည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည် SWL ကိုသုံးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် <° Linux haha ​​၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း၊ ငါတို့နောက်ဆုံးတွေ့ပြီ၊ မင်းမင်းရဲ့ယခင် avatar ကိုသုံးပြီးသားဖြစ်နေပြီ။
ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံထဲရှိပါကနောက်ဆုံးတွင်၊ https://blog.desdelinux.net/nosotros/ ? ဟားဟား
မှတ်ပုံတင်ပြီးပါပြီ။ ဖိုရမ်၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပါ။ 😛
ကောင်းပါပြီ၊ သင့်ကို <° Linux ပရောဂျက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ချီးကျူးပါတယ်။
Arturo Molina ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တရားကသတင်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ငါသည်လည်းမှတ်ပုံတင်ပြီးသားပါ မင်္ဂလာပါ။
Arturo Molina သို့ပြန်သွားပါ
Manuel Escudero ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ပဏာမခြေလှမ်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည် now ကျွန်ုပ်သည်“ CLABSOL” ဟုခေါ်သော Latin OpenSource ဘလော့ဂါများအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ပိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်အရာအားလုံးပင် Planet တစ်ခုရှိသည်။ အကယ်၍ စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် / သို့မဟုတ်အစပြုသူများသည်လက်တင်အမေရိကရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် CLABSOL နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ကြားသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များမှာ -
Manuel Escudero အားပြန်ပြောပါ
BuU ငါ xD -chistemalo ဖိုရမ်များတွင် troll တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ ငါ Linux MInt Hispanic ဖိုရမ်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထို site သည်တစ်ခဏမျှရှင်သန်ခြင်းထက် ပို၍ သေသည်။ 3;
ငါဖိုရမ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၃ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကမျှပါဝင်ခြင်း (သို့) ပြောရန်များစွာမကူညီခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
JAJAJAJAJAJA Jolla Trolls များပိုမိုတည်ရှိရန်အမြဲတမ်းနေရာရှိသည်။
Linux Mint ဟစ်စပန်းနစ်ဖိုရမ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုရမ်ကို၎င်းသို့မဟုတ်မဖွင့်ရန်အသုံးမပြုပါ။ ဟဟားဟား။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌အလွန်ကောင်းသော vibe ရှိသည်ဟုသတိထားပါ။ သတိထားပါ၊ အဲဒီမှာ okis) နှင့် nah ကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကူညီရန်ပင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်အခုသင်သိပြီ၊ အကယ်၍ သင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမူမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းရဲ့အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာသူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သင်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူမယ်ဆိုရင် ... မင်းဟာဘုရင် Troll HAHAHAHA ဖြစ်နိုင်တယ်။
SRWare Iron တွင် User Agent ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
အမျိုးမျိုးသော distros များအတွက် Rukia Kuchiki LXDM ဆောင်ပုဒ်